CBD iyo Caafimaadka | Xulashadaada Caafimaadka ee ugu Fiican 2020
CBD iyo Caafimaadka
CBD iyo Faa'iidooyinka Caafimaadka
CBD iyo Guryaha Xoojinta Caafimaadka
Isbeddellada moodada badiyaa way baaba'aan, laakiin CBD ayaa halkan u joogta. Xaqiiqdii, xashiishadda ayaa kumanaan sano loo adeegsan jiray ujeeddooyin kala duwan, gaar ahaan kuwa dawada ah. Si aan fikrad kaaga siiyo, markii ugu horreysay ee xashiishadda laga xuso taariikhdu markay ahayd 2300 BC, buugga Shiinaha ee la yiraahdo Shu King. Waxay u adeegsadeen labadaba inay ka sameeyaan xargo iyo dhar iyo inay daaweeyaan laabotooyinka iyo xanuunka caadada oo daran. Awood -u -lahaanshaha geedkaan maahan wax cusub.
In kasta oo ay cadahay in CBD ay hadda marayso heer aad u qurux badan, waxaan rabnaa inaan u malayno inay dhacayso maxaa yeelay, ugu dambayn, iyo sannado badan ka dib, macluumaad cad oo sax ah oo ku saabsan qaybtan dhirta cannabis Sativa ayaa maalmahan la heli karaa. Kordhinta daraasadaha ammaanaya oo xaqiijinaya faa'iidooyinka qaybtan, iyo daabacaaddooda, waxay shaki la'aan gacan ka geysteen xaqiijinta waxa dad badani hore uga shakiyeen: CBD waxaa ku jira faa'iidooyin caafimaad oo badan.
CBD ama cannabidiol waa cannabinoid laga helo warshadda xashiishadda. In ka badan boqol cannabinoids oo ku jira cannabis Dhirta Sativa, waa qaybta ugu daraasadda badan, oo leh awoodda daaweynta ugu weyn taasna waxaa si fiican u nuugay nidaamkeenna. Mas'uul ka ah nuugitaankan ayaa ah soo -dhoweeyeyaasha cannabinoid ee laga helo unugyada jirka oo dhan, gaar ahaan maskaxda iyo nidaamka difaaca. Isticmaalka CBD wuxuu keenaa soo -dhoweeyeyaasha cannabinoid inay dhaqaajiyaan oo ku xidhaan dusha sare ee unugyada, taasoo horseedda nidaam firfircoon oo caafimaad qaba endocannabinoid.
Oo, hadda, waxaad la yaabi doontaa waa maxay nidaamka endocannabinoid iyo maxaa loogu talagalay? In kasta oo ay tahay nidaam aad u qallafsan, haddana waxaan soo koobi karnaa in nidaamkani uu ku lug leeyahay habab kala duwan oo jir ahaaneed, sida sharciyeynta aragtida xanuunka, iyo sidoo kale wadnaha, dheef -shiidka, iyo shaqooyinka beerka, taas oo ka dhigaysa CBD iyo caafimaadka si aad ah isugu xiran.
Laakiin hadda, aan ka hadalno xaqiiqooyinka. Sidee CBD ii caawin kartaa? Codsiyada dawooyinka ee maaddadani waa kuwo badan oo aan la aqoon. Saynis ahaan, waxaa la caddeeyay inay yareyso oo ka hortagto barar iyo lallabo, sonkorow, hurdo la'aan, murugada murugada ka dib, shisoofrani, rheumatoid arthritis, cudurrada wadnaha, xannuunka dhimirka, anxiolytic, iyo xitaa xanuunka, ka hortagga xanuunka neuropathic iyo murqaha way ka adag tahay in lagu daaweeyo daawooyin kale, xitaa farmashiye ahaan. Sidoo kale waa daaweyn awood u leh suuxdinta, sclerosis badan, iyo sidoo kale la dagaallanka lumitaanka rabitaanka cuntada. Intaa waxaa sii dheer, si ka duwan THC, CBD badan ma aha walax nafsiyadeed, lidkeeda, waxay leedahay saamayn dejin iyo dejin. Run aan la rumaysan karin?
Hadda waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso meesha aad ka heli karto badeecadaha noocan ah? Waxaa jira dhowr shirkadood oo bilaabay hammiga CBD laakiin in yar ayaa awood u leh inay qanciyaan heerarka baahida macaamiisha. Shaki la'aan, Red Emperor CBD waa mid ka mid ah kuwa ugu kalsoonida badan ee loo qaybiyo CBD. Shirkad dhallinyaro ah oo wax-soo-saarkeedu aad uga badan yahay filashooyinka qof kasta oo yaqaan sida loo kala saaro badeecadaha tayada dhexdhexaadka ah iyo kuwa tayada sare leh. Labadaba dhadhanka iyo udugga burooyinkeeda xoogga leh, waad ka mahadcelin kartaa daryeelka beerista hemp warshadaha, oo si buuxda loola socdo iyo xaaladaha wanaagsan ee loo abuuray si loo helo alaab qiimo leh. Iyada oo ka yar 0.3% THC dhammaan noocyadeeda, dhammaan alaabada Red Emperor CBD waxay ka yimaadaan beerista hemp warshadaha organic.
Saliidda CBD ee ka timaadda Red Emperor CBD ayaa kuu noqon karta xal wanaagsan. Codsi hoosaad, saliiddan buuxda waxay kaa caawin kartaa inaad seexato oo, sidaa darteed, ku raaxayso nasasho ka nasasho badan, oo aad u adag in lagu gaaro marxaladaha walaaca ama walaaca. Waxa kale oo ay aad waxtar ugu leedahay xanuunka waxayna baddali kartaa ka -yareeyeyaasha xanuunka. Codsiyadeeda la xaqiijiyay, oo uu kormeerayo xirfadle iyo qaddarro gaar ah, waxaa la tusay inay kor u qaadayso tayada nolosha dadka qaba cudurka Parkinson iyo suuxdinta.
Sida aad arki karto, muhiim ma aha in la adeegsado maandooriyeyaasha balwadda leh ee leh waxyeellooyinka waxyeellada leh. Waxaad isku dayi kartaa CBD waxaana hubaal ah in caafimaadkaagu hagaagi doono. Dabeecaddu waa xikmad waxayna na siisaa wax kasta oo aan ugu baahanahay caafimaadkeena iyo samaqabkayaga, maxaad uga faa'iidaysan weyday?
Hadda Waxaad Si Sharci Ah Ku Helaysaa Gobollada Badankood. Waxaa qoray Lifehacker
Previouspost Previous:Waa maxay CBD Oil? | Alaabta ugu fiican ee 2021Nextpost Next:Daryeelka Maqaarka ee CBD oo leh Sam Cheow, Ku -xigeenkii Hore ee Laurel Makeup